XOG MUHIIM AH+AKHRISO: Dagaalka Qowmiyadaha Oramadda & Soomaalida oo gilgilay Siyaasadda D. Faderaalka Itoobiya – PUNTLANDTIMES- KA DHIGO ISHA WARARKA EE CAALAMKA & SOMALIA
Home 2017 October W.Gudaha, Wararka Maanta XOG MUHIIM AH+AKHRISO: Dagaalka Qowmiyadaha Oramadda & Soomaalida oo gilgilay Siyaasadda D. Faderaalka Itoobiya
XOG MUHIIM AH+AKHRISO: Dagaalka Qowmiyadaha Oramadda & Soomaalida oo gilgilay Siyaasadda D. Faderaalka Itoobiya
ADDIS ABABA(P-TIMES)- Inkastoo ay adag tahay in warbaahinta xorta ah ay warbixino ka qorto gudaha dalka Itoobiya, haddana xiisaddo siyaasadeed oo ka dhashay dagaaladii dhexmaray Qowmiyadaha Oramadda iyo Soomaalida ayaa kiciyey laqanyo siyaasadeed oo horeysay Xukuumada Faderaalka.
Ergada labada dhinacba ugu jirta dawladda Faderaalka ayaan jecleysan qaabka ay ciidamada Faderaalka ugu jawaabeen weeraradii ugu dambeeyey iyo dagaalkii dhimashada badan sababay ee ay Oramadu ku qaadeen Soomaalida.
Sidaas oo kale faragalintii ay ciidamada Booliska ee labada dhinacba kaga qeybgaleen dagaalka ayaa kiciyey hurgumo siyaasadeed oo taagnaa, waxaana jiray khilaaf horey ugu dhaxeeyey labadan maamul oo deris ah.
Raysalwasaaraha Itoobiya ayaa lagu eedeeyey in uusan si wanaagsan u maamulin dhacdadan, isla markaasna ay ciidamada Faderaalku si toos ah uga jawaabeen falkii lagu dilay 43 qof oo Soomaali ah, ayna laayeen dad badan oo Oromo ah laguna tuhmayo falkaas.
Gudoomiyihii baarlamaanka ee dalka Itoobiya Abadulahi Gemeda ayaa Isniintii kaga dhawaaqay kalfadhiga baarlamaanka dalkaas oo ka furmay Addis Ababa in uu shaqada ka tagay, waxaana uu sabab uga dhigay arrimo isagga u gaar ah.
Laakiin wararka laga helayo gudaha Itoobiya ayaa sidaas ka duwan, waxayna dhab iyo xaqiiqo ka dhigayaan in gudoomiyaha Is casilay uu diiday sidda ay Xukuumadda Faderaalku u maareysay khilaafka labada dhinac ee deriska ah.
Mr, Gemeda ayaa kamid ahaa raggii ugu cuslaa ee Xisbiga talada haya, wuxuuna hogaamiyaa sadexda Xisbi ee ku mideysan Xisbiga talada dalka Itoobiya mudada dheer haya ee lagu magacaabo EPRDF, tagidiisa ayaa ah dhaawac siyaasadeed.
Wargeyska AS ayaa soo xigtay ilo ku dhaw dhaw gudoomiyaha ayaa leh iscasilaadan, waxay dhabaha u xaari kartaa howl siyaasadeed oo galaangalkeeda iyo shishadeeda wadata,waxaana Gudoomiyaha uu awood xad-dhaaf iyo taageero ah ka haystaa Qowmiyadda uu ka soo jeedo oo uu hadda daraadood shaqadiisa uga tagay.
Raysalwasaaraha Itoobiya ayaa si adag ula hadlay hogaamiyaha Ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya, wuxuuna ku canaantay talaabooyin ay qaadeen, isagoo u sheegay in looga baahan yahay in aysan Ummadda u horseedin dhib iyo fowdo cusub oo laga dhex sameeyo xadka labada dhinac.
Warbaahinta ay maamulaan labadan dawlad gobaleed ayaa isku adeegsaday Erayo kasta oo ay awoodaan, taas oo sii kordhisay xiisada labada dhinac, ka dibna taasi waxay BAASIIN kusii shubtay xiisadda kataagan Xukuumada Faderaalka oo saameynteeda meelo badan laga dareemay.
EPRDF ayaa lagu eedeeyaa inta badan in uu yahay mid kaliya ee kajira Itoobiya, waxaana marar badan ay Hay’addaha Xaquuqda Aadanaha iyo Dawladdaha Reer galbeedku ku eedeeyaan in uu ku tuntay Xaquuqda Shacabka iyo dadka ka soo horjeeda siyaasadiisa oo ay mudo dheer Xabsiyo iyo dilal Maxkamadeedba ku fuliyaan.
Lama garan karro halka ay saldhigan karto xiisadda u dhaxaysa Soomaalida & Oramada oo saameyn ku yeelatay siyaasadda guud ee dalka Itoobiya, waxaana jiray bilihii u dambeeyey khilaaf aan awood yareyn oo ka dhex jiray Xisbiga talada ee EPRDF, kaas oo uu hadda banaanka u soo shaac-baxay.